Tao anatin’ny herinandro: olona 2 252 tratra tsy nanao arovava, 117 naiditra ”violon” | NewsMada
Tao anatin’ny herinandro, izany hoe, ny 7 septambra hatramin’ny omaly alatsinainy 14 septambra, nahatratra 2 252 ireo olona tratran’ny polisy tsy nanao arovava, ary 117 kosa ny nosazina hanao asa ho amin’ny tombontsoam-bahoaka sy nampidirina ”violon”.
Manerana ny Nosy ity hetsika manokana nataon’ny Polisim-pirenena ity ho fanajana ny fampanarahan-dalàna ny fepetra ara-pahasalamana manoloana ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus. Nandritra izany ny nahazoana izao antontanisa nomen’ny polisy izao. Nanamafy ny eo anivon’ny Polisim-pirenena fa mialoha ny fanasaziana, nisy hatrany ny fanentanana ny olom-pirenena tsirairay avy ny hanajan’izy ireo ny fepetra ara-pahasalamana amin’ny alalan’ny fanaovana arovava. Maro rahateo ny alaim-panahy fa efa resy ny valanaretina ka somary goragora amin’ny fanarahan-dalàna. Tsy miraharaha intsony ny fanaovana arovava na manao ihany fa apetraka eo ambany saoka sy/na rehefa mahita mpitandro filaminana vao mody mametaka izany. Raha ity antontanisa nomen’ny eo anivon’ny Polisim-pirenena ity, miisa 2 252 ireo olona nampanaovina TIG ka tany amin’ny faritra Boeny ny tena betsaka indrindra satria nahatratra 464 ny isan’ireo olona nampanaovina izany. Faharoa manaraka izany ny ao amin’ny faritra Diana satria miisa 350 ireo olona nampanaovina TIG. Fahatelo ny faritra Sava, miisa 349, arahin’ny faritra Matsiatra Ambony, miisa 349. Ireo, araka izany, ireo faritra nahitana olona tsy nanara-dalàna ka voatery nampanaovina TIG. Miisa 117 kosa ireo olona naiditra “violon”;
“Mbola hitohy ny fanasaziana…”, hoy ny Polisy
Nanamafy hatrany ny Polisim-pirenena fa hitohy hatrany ny fanasaziana ho an’ireo minia tsy miraharaha ny fepetra napetraky ny fanjakana manoloana izao ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus izao. Miovaova rahateo ny antontanisa omen’ny CCO isan’andro amin’ny fivoaran’ny aretina. Mampahazo vahana ny goragora sy ny gaboraraka koa ny namahana tsikelikely ny fihibohana kanefa tsy hentitra sy/na henjana ny fepetra raisina, hany ka manao izay tiany hatao ny olona sasany indraindray. Zary lasa atao haingon-doha fotsiny ny “visière” ho an’ny mpamily taxi-be sy ny resevera. Tsy hita intsony koa ny tsiranoka fanasan-tanana mialoha ny hidirana ao anaty taxi-be. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana ihany no lalana haingana andresena ity valanaretina ity. “Samy tompon’andraikitra ny tsirairay fa aza atao tahotra amin’ny fanaovana arovava ny mpitandro filaminana”, hoy ny Polisy.